Kordhinta Sawirada emaylkaaga ee muuqaalka isha | Martech Zone
Maaddaama soo-bandhigyada xallinta-sarreeya ay noqdaan meel caadi ah qalab kasta, waxaa muhiim ah in suuqleydu ay ka faa'iideystaan ​​saameynta uu leeyahay xallinta sare. Hufnaanta sawirada loo adeegsaday emayllada, tusaale ahaan, waxay saameyn ba'an ku yeelan kartaa akhristaha emaylka. Abuuritaanka sawiradaada si sax ah ka dibna cabir / cabiridooda - dhammaantood intaad kafiicineyso cabirka feylasha ee sawirada - waa isku dheelitirnaan jilicsan si loo hubiyo in lagugu habeeyay jawaabta ugu fiican iyo qiimaha gujinaya ee emaylladaada.
Sawir-gacmeedkan oo laga soo xigtay Email Monks, Email Retina - Dib-u-habeynta Khibradda Isticmaalaha oo leh Muuqaal Tayo Sare leh, waxay kuu adeegaysaa talooyin deg deg ah oo ku saabsan sida loo qaabeeyo iminalada saaxiibtinimo ee isha, adoo maskaxda ku haya saamiga sawirka ee saxda ah, cabirka faylka sawirka, weydiimaha warbaahineed ee naqshadeynta emaylka jawaabta iyo qaybaha kale ee muhiimka ah.
Tags: hawadanaqshadeynta emaylkainfographic emailemail suufiyadoodiibandhig tayo sare lehipadipad miniiphoneMacbook 3bandhig muuqaal ahemaylka ishaxalka retina